ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ, စိတ်ခွန်အားနိုးစပီကာနဲ့ productivity နည်းပြ - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
Stoyan Yankov နှင့်အတူအင်တာဗျူး
Stoyan Yankov 29 နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး Aarhus, ဒိန်းမတ်တွင်နေထိုင်သည်။ သူက "ဘဏ္ဍာရေး" တွင်မဟာဘွဲ့နှင့်အတူ Aarhus တက္ကသိုလ်မှကနေဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ လောလောဆယ်သူတစ်ဦးထုတ်လုပ်သူအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အဘို့မိမိကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ် ဗီဒီယိုကိုဘဏ်ဍာရုပ်ပုံများ Up ကိုအဆင့်အဘယ်မှာရှိဒိန်းမတ်ထုတ်လုပ်သူသောမတ်စ်ဘို Husmann နှင့်အတူသူမိတ်ဖက်။ သူလည်းတစ်ဦးစိတ်ခွန်အားနိုးစပီကာနဲ့ productivity နည်းပြဖြစ်ပါတယ်။
အခက်အခဲအမြဲတည်ရှိ, ထိုအရပ်၌သူတို့ကိုအများကြီးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားတွေကိုသို့မဟုတ်အောင်မြင်မှုတွေကနေရရှိအတွေ့အကြုံတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောနှင့်ရောင်စုံဖြစ်ပါတယ်။ ခြေလှမ်းတို့ကအဆင့်, ဖြည်းဖြည်းပေမယ့်ဧကန်အမှန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရည်မှန်းချက်နီးကပ်လာရ။ ထိုအခါရည်မှန်းချက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တောက်ပဖြစ်ခြင်းနှင့်အောင်မြင်မှု၏လမ်းကြောင်းအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုပဲ့ပြင်သင့်ပါတယ်။ လူတိုင်းမြင့်မားတဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုသတ်မှတ်ထားကြသောအခါ၎င်းတို့၏အကောင်းဆုံးပေးဖို့ကြိုးပမ်း။
Stoyan Yankov ©
ငါနီးပါး 10 နှစ်ပေါင်းရုပ်ရှင်ရုံများတွင်စေ့စပ်ပြီ။ ဒါဟာဝါသနာအဖြစ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူအမျိုးမျိုးသောဗီဒီယိုများနှင့်ရုပ်ရှင်ပစ်သတ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့, ငါ၏စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသို့လှည့်။ ငါသည်ငါ့မာစတာဘွဲ့ယူစဉ်အခါ, ငါတိုတောင်းသောရုပ်ရှင်, ကြော်ငြာနှင့်ဂီတဗီဒီယိုတွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့ငါ့အလိုရှိသမျှအခမဲ့အချိန်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်ဖန်တီးပုံပြင်များပြောပြရန် - တဦးတည်းမှာငါကိုချစ်ဘာလုပ်ခဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ တစ်နည်းနည်းနဲ့ဒီထုတ်လုပ်သူများ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စီးပွားရေးငါ၏အသိပညာတစ်ခုထုတ်လုပ်သူများနှင့်မန်နေဂျာအဖြစ်အလွန်အကျိုးရှိသည်အဘယ်မှာရှိငါကြော်ငြာနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အထူးပြု။
အဆင့် Up ကိုရုပ်ပုံများ - လောလောဆယ်ငါသည်ငါ့ကိုဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီအတွက်စီမံကိန်းများကိုလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ကျနော်တို့အသစ်တစ်ခုကိုရုပ်ရှင်ပေါ်အလုပ်လုပ်နေကြသည်။ ဒါပေမယ့်ငါ့အအဓိကအာရုံစိုက်သို့သော်အများပြည်သူစကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏အသစ်ကဟောပြောပွဲဟုခေါ်သည် ဘဝတစ်ဦးက MOVIE ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ငါကလူသူတို့ကအဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်ဖို့အိပ်မက်မက်ထားတဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်စိတ်ကူးကိုကူညီမယ့်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်သင်ယူင့်ကြောင်းပုံပြင်များနှင့်သင်ခန်းစာများကိုကိုအသုံးပြုပါ။ ငါလူတိုင်းကိုသူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေ၏ဘဝအသက်တာအသက်ရှင်နေထိုင်သင့်တယ်ထင်! မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ကျွန်မလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေး, နည်းပြနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုများအတွက်ဆွေးနွေးပွဲများ, အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်သင်တန်းများသွားပါ။ UPW နှင့်အတူလိုပဲ တိုနီ Robbins ဥပမာ။ ထိုနောက်မှငါသည်အချိန်ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်ပိုပြီးဖြစ်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ဖြစ်လူတွေကိုလာအောင်နှိုးဆွဖို့နဲ့အေးမြပစ္စည်းပစ္စယကိုဖန်တီးရန်အရာအားလုံးကိုပေးစေခြင်းငှါလာသည်ဟုခံစား!
Arene - သိပ္ပံ-Fi ကိုက Short ရုပ်ရှင်ပွဲတော်
အကြောင်းပိုမို Stoyan Yankov
ရုပ်ရှင်ရုံ, မီးရထားတှဲ, ဒိန္းမတ္, Diyan Rusev, ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ, တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးပုံပြင်များ, အကွောငျးရငျး, စိတ်ခွန်အားနိုးစပီကာ, ရုပ်ရှင်, ထွက်နိုင်ရေး, စပီကာ | 13-12-2016 | rating:5/ 30